Bible Mu Nsɛm Yesu San Kɔ Soro - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
NNA no retwam no, Yesu yii ne ho adi kyerɛɛ n’akyidifo mpɛn pii. Asuafo bɛyɛ 500 huu no da koro. Bere a oyii ne ho adi kyerɛɛ wɔn no, wunim asɛm a Yesu ka kyerɛɛ wɔn? Onyankopɔn ahenni ho asɛm. Yehowa somaa Yesu baa asase so sɛ ɔmmɛka Ahenni no ho asɛm. Na wonyan no fii awufo mu akyi mpo no ɔkɔɔ so yɛɛ eyi.
Wokae nea Onyankopɔn ahenni yɛ? Yiw, Ahenni no yɛ Onyankopɔn nniso ankasa a ɛwɔ soro, na Yesu ne Nea Onyankopɔn apaw no sɛ ɔhene. Sɛnea yɛahu no, Yesu kyerɛɛ ɔhempa a ɔbɛyɛ bere a ɔmaa wɔn a ɔkɔm de wɔn aduan, saa ayarefo yare, na onyan awufo mpo no!
Enti bere a Yesu bedi hene ɔsoro mfe apem no, asase yi so bɛyɛ dɛn? Yiw, asase nyinaa bɛdan paradise fɛfɛɛfɛ. Akodi, nsɛmmɔnedi, ɔyare, ne owu mpo befi hɔ. Yenim sɛ eyi yɛ nokware efisɛ Onyankopɔn bɔɔ asase ma ayɛ paradise a nnipa benya mu anigye. Ɛno nti na mfiase no ɔyɛɛ Eden turo no. Na Yesu bɛhwɛ ma wɔayɛ nea Onyankopɔn hwehwɛ sɛ wɔyɛ nyinaa.
Afei na bere adu sɛ Yesu san kɔ soro. Na Yesu ayi ne ho adi akyerɛ n’asuafo no mpɛn pii adaduanan. Enti na wɔahu ampa sɛ wasan aba nkwa mu. Nanso ansa na ɔrefi n’asuafo no nkyɛn no ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: ‘Montra Yerusalem nkosi sɛ mubenya honhom kronkron.’ Honhom kronkron yɛ Onyankopɔn adeyɛ tumi, te sɛ mframa a ɛrebɔ, a ɛbɛboa n’akyidifo ma wɔayɛ Onyankopɔn apɛde. Awiei koraa no Yesu kae sɛ: ‘Ɛsɛ sɛ moka me ho asɛm kɔpem asase ano nyinaa.’
Yesu kaa eyi akyi no, anwonwade bi sii. Ofii ase sɛ ɔrekɔ soro, sɛnea wuhu wɔ ha no. Afei ɔkɔhyɛɛ amununkum mu, na na asuafo no nhu Yesu bio. Yesu kɔɔ soro, na ofi hɔ fii ase dii tumi wɔ n’akyidifo a wɔwɔ asase so no so.
1 Korintofo 15:3-8; Adiyisɛm 21:3, 4; Asomafosɛm 1:1-11.
Asuafo baahe na wohuu Yesu da koro, na dɛn asɛm na ɔka kyerɛɛ wɔn?
Dɛn ne Onyankopɔn Ahenni, na asase so asetra bɛyɛ dɛn bere a Yesu di so sɛ Ɔhene mfirihyia apem no?
Nna ahe na Yesu de ayi ne ho adi akyerɛ n’asuafo no, nanso dɛn na bere adu afei sɛ ɔyɛ?
Ansa na Yesu refi n’asuafo no nkyɛn no, dɛn na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ wɔnyɛ?
Dɛn na ɛrekɔ so wɔ mfonini no mu, na dɛn na amma wɔanhu Yesu bio?
Kenkan 1 Korintofo 15:3-8.
Dɛn na ɛmaa ɔsomafo Paulo tumi de ahotoso kaa Yesu wusɔre no ho asɛm, na nneɛma bɛn na nnɛ Kristofo betumi de ahotoso aka ho asɛm? (1 Kor. 15:4, 7, 8; Yes. 2:2, 3; Mat. 24:14; 2 Tim. 3:1-5)
Kenkan Asomafo Nnwuma 1:1
Sɛnea wɔhyɛɛ nkɔm wɔ Asomafo Nnwuma 1:8 no, asɛnka adwuma no trɛw koduu he? (Aso. 6:7; 9:31; 11:19-21; Kol. 1:23)